Ichaphazele njani i-COVID yokuhamba noKhenketho eFrance kwi2020
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseFransi ezaphulayo » Ichaphazele njani i-COVID yokuhamba noKhenketho eFrance kwi2020
uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Ifuthe le-France COVID
E-France, ilizwe lezokhenketho kunye nezoKhenketho zenze igalelo kwi-49.1 yepesenti engaphantsi kwi-GDP yelizwe phakathi kuka-2019 no-2020 ngenxa ye-COVID-19.
IFransi ilahlekelwe ngumsebenzi omnye kwali-1 okoko kwaqhambuka i-COVID-11.
Kwi-2019, imisebenzi ezizigidi ezingama-334 kweli lizwe inegalelo kushishino lokuhamba nezokhenketho laseFrance.
Igalelo le-GDP kwicandelo lezokhenketho eFrance lisuke kwiipesenti eziyi-8.5 laya kwiipesenti ezi-4.7 ukusuka kowama-2019 ukuya kowama-2020.
Impembelelo kubakhenkethi bamanye amazwe kwinkcitho ihambe ukusuka kwi-60.4 yezigidigidi ze-euro ukuya kwi-28.5 yezigidigidi ze-euro, ilahleko engama-52.9 epesenti ukusuka ngo-2019 ukuya ku-2020. Amanani athelekisa inkcitho yasekhaya ibingama-115.5 epesenti ngowama-58.0 nama-49.8 eepesenti ngowama-66.
Imakethi yokuhamba ngokuzonwabisa inyuke ukubonisa iipesenti ezi-3 zokuchitha ixesha lokuzonwabisa eFrance.
Ukufika okuphezulu okungu-5 okuphezulu ukuya Fransi ngo-2020 babe:
-IJamani: iipesenti ezisi-16
-Belgium: iipesenti ezili-15
-United Kingdom: iipesenti ezili-13
-Switzerland: iipesenti ezili-9
-I-Italiya: iipesenti ezili-8
Iimarike ezi-5 eziphambili ezithandwa ngabahambi baseFrance zezi:
- Iunited Kingdom
Le datha isekwe kwi- WTTC Ingxelo ngezoThutho zezoqoqosho, ityhila igalelo elibonakalayo le-COVID-19 kuKhenketho noKhenketho kwihlabathi liphela.
Phambi kobhubhane, uKhenketho noKhenketho (kubandakanywa iimpembelelo zalo ezithe ngqo, ezingathanga ngqo kunye nezo zibangelwe) zenza i-1 kwayi-4 kuyo yonke imisebenzi emitsha eyenziweyo kwihlabathi liphela, iipesenti ezili-10.6 zayo yonke imisebenzi (334 yezigidi), kunye neepesenti ezili-10.4 ze-GDP yehlabathi (US $ 9.2 trillion). Inkcitho yabatyeleli bamanye amazwe yafikelela kwi-US $ 1.7 trillion ngo-2019 (6.8 pesenti yokuthumela ngaphandle, 27.4 yepesenti yokuthumela ngaphandle iinkonzo).
Olu phando lukwabonisa ukuba icandelo lezoKhenketho noKhenketho lifumene ilahleko ephantse ibe yi-US $ 4.5 trillion ukufikelela kwi-US $ 4.7 trillion ngo-2020, ngegalelo kwi-GDP lehla ngama-49.1 epesenti xa kuthelekiswa nowama-2019; xa kuthelekiswa nokwehla kwe-3.7 yeepesenti ye-GDP kuqoqosho lwehlabathi ngo-2020. Ngo-2019, icandelo lezoKhenketho noKhenketho lifake igalelo nge-10.4 yeepesenti kwi-GDP yehlabathi; isabelo esiye sehla saya kwiipesenti ezi-5.5 ngo-2020 ngenxa yezithintelo eziqhubekayo zokuhamba.